के फरक छ गीता र मार्क्सको साम्यवादमा ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
के फरक छ गीता र मार्क्सको साम्यवादमा ?
मानिस सिर्जनशील प्राणी हो । त्यसो त, सिर्जना सजीव मात्रको धर्म हो । बोटबिरुवाहरू पनि सिर्जनशील हुन्छन् । कीटपतङ्ग, जीवजन्तु र पशुपक्षी सबैलाई सिर्जनाको धर्म निर्वाह गर्ने विशेष शक्ति दिएर प्रकृतिले पठाएको हुन्छ । जङ्गलमा हामीले चराहरूले बनाएका अनेकथरी गुँणहरू देख्ने गर्दछौँ । त्यसरी बनाइएका गुँणहरू अत्यन्त सामान्यदेखि लिएर अत्यन्त कलात्मकसम्मका हुने गर्दछन् । कमिलाहरू पनि त्यत्तिकै सिर्जनशील हुने गर्दछन् । जङ्गलमा बनाइएका धमिराका गोलाहरू मान्छेले बनाएका मन्दिरजस्तै कति आकर्षक देखिन्छन् । हामीले कुमालकोटी भनेर चिनिने एउटा किराले माटोको प्रयोग गरेर बनाउने घर साँच्चै नै कलात्मक देखिन्छ ।
माटोमा उम्रिएका हरेक बिरुवाहरू फुल्दा र झुल्दा निकै कलात्मक देखिन्छन् । ती कुनै पनि बिरुवाहरू नयाँ बिरुवा नउमारीकन समाप्त हुँदैनन् । यसरी, हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्दछौँ भने जीवन भन्नु नै सिर्जनाको नाम रहेछ । यहाँ हरेकको काम नयाँनयाँ सिर्जना गर्नु हो । सिर्जना नगरीकन कसैको पनि जीवन पूर्ण हुन सक्दैन । यसरी हेर्दा सिर्जनाकै कारण हामीले जीवनमा तृप्तिको अनुभव गर्दा रहेछौँ । मनुष्यले यसोउसो जे गरे पनि केही न केही नयाँ सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । कसैले व्यापार गरेको छ, कसैले जागिर खाएको छ भने कसैले नयाँनयाँ कुराको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गाँस, बास र कपास मानिसका आधारभूत आवश्यकता अवश्य हुन्, तर यत्तिले मात्रै मानिस सुखी हुन कदाचित् सक्दैन । धनसम्पत्ति प्रशस्त भए पनि, ठुलो र भव्य घरमा बसे पनि र मिठामिठा कुरा खान पाए पनि मानिस सुखी भएको हुँदैन । बाँच्नसम्मका लागि गाँस, वास र कपास अनिवार्य हुन् । तर, बाँच्नु भनेको हिँडडुल र बसउठ मात्र होइन । गतिशील र अर्थपूर्ण बँचाइ नै मानिसको वास्तविक बचाइ हो । मानिसको जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि उसको सिर्जनशीलताको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ ।
हामी बाँच्दा पनि हाँसीहाँसी बाँच्न सकौँ, सुविधाका साथ बाँच्न सकौँ अनि इज्जत र पूर्णप्रतिष्ठाका साथ बाँच्न सकौँ भन्ने मानिसको चाहना हुन्छ । उसको यही चाहनाका कारण आजको विश्व यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो । खानु, बस्नु र लगाउनु मात्र जीवनको उद्देश्य भएका भए मानिस समाजमा यसरी मिलेर बस्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । मानिसले चन्द्रमा, मङ्गल आदि ग्रहहरूमा पनि पाइला टेकेको हुँदैनथ्यो । हिँडेर जाँदा महिनौँ लाग्ने ठाउँहरूमा मानिस केही घण्टामै पुग्ने कुरा सम्भव हुँदैनथ्यो । जीवनको उद्देश्य के हो ? हामीले गर्नुपर्ने के हो ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरूमाथि चिन्तन गरेर पीडाका समयमा पनि सुखी हुन सिकाउने अध्यात्मज्ञान हामीले प्राप्त गर्नेै थिएनौँ ।
सिर्जनशीलता नै जीवन हो भन्ने सत्यलाई आजको मानिसले गरेका अनेक अनुसन्धान, आविष्कार र नयाँनयाँ प्राप्तिहरूले प्रमाणित गरिदिएका छन् । तर, सिर्जना कहिल्यै पनि एकदेशीय, एकपक्षीय र सङ्कीर्ण हुँदैन । यसका अनेक आयामहरू हुने गर्दछन् । हामीले जहाँ हे¥यो, उहीँ सिर्जनशीलता प्राप्त गर्न सक्दछौँ । यदि कला र सिर्जना एकपक्षीय मात्र भएका भए सबै मानिस कवि मात्रै हुनेथिए अथवा गीत गाउने गायक र गायिका मात्र हुने थिए । तर, मानिस सबै भएका छन् : गीतकार, गायक, चित्रकार, सङ्गीतकार, वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक, पत्रकार, आदिआदि ।
हामी जेचाह्यौँ, त्यही बन्न सक्दछौँ । हामीभित्र के छ, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । यदि हामीभित्र कवि व्यक्तित्व बलियो छ भने हामी कवि हुन सक्दछौँ । चित्रकारिताको प्रतिभा बलियो छ भने चित्रकार हुनबाट हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । होइन, हामीभित्र मिठो सङ्गीत छ भने हामी सङ्गीतकार बनेर देखा पर्दछौँ । जेहोस्, हामीभित्र सबैमा फरकफरक प्रतिभा लुकेर बसेको छ । त्यसलाई अभिव्यक्त ग¥यौँ भने हामी त प्रसन्न हुन्छौँ नै, सँगसँगै हाम्रो समाज र वरपरका मानिस पनि सुखी हुन्छन् किनभने सिर्जना सबैका लागि हो । आफ्ना लागि त गाँस, बास र कपास मात्रैले पनि काम चल्न सक्दछ । तर, सबैका लागि प्रिय हुने कुरा भनेकै हामीभित्रको कला र सिर्जनाको शक्ति हो ।
यसैले, मनुष्यका लागि सिर्जनशीलताले सबैभन्दा उच्च मूल्य राख्छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । अब, सिर्जनशीलता मनुष्यको धर्म र पहिचान हो भन्ने कुरा त स्पष्ट भयो, तर सिर्जनशीलता कसरी अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ । जहाँ सिर्जनशील वातावरण हुन्छ, त्यहीँ हामीभित्रको सिर्जनशीलताले पनि प्रकाशित हुने अवसर प्राप्त गर्दछ । सिर्जनशील वातावरण कस्तो हुन्छ त त्यसोभए ? सिर्जनशील वातावरण शान्त हुन्छ । हामीभित्रको एकान्त जहाँ प्रकट हुन्छ, त्यो वातावरण नै सिर्जनामैत्री वातावरण हो । जति सामाजिक सद्भाव, एकता र मैत्री बलियो भयो, त्यति नै सामाजिक शान्ति बलियो हुन्छ । र, त्यही शान्त वातावरणभित्र हामीभित्रको प्रतिभाले प्रकाशित हुने मौका पाउँदछ ।
सामाजिक सद्भाव, मैत्री र परस्परको निष्ठा कसरी वृद्धि हुन्छ त त्यसोभए ? विद्वान्हरू भन्दछन् हामीभत्रको काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्भावनाहरू जतिबेला हट्दछन्, त्यति नै बेला समाजमा परस्पर विश्वास र सहकार्यको भावना पैदा हुन्छ । कसैले कसैप्रति पनि द्वेष, ईश्र्या र प्रतिशोधको भावना नराख्ने अवस्था नै सामाजिक शान्ति र सद्भाव वृद्धि हुने अवस्था हो ।
हामी सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकार्ने बानीको विकास हुने हो भने मात्र मान्छेको समाज समुन्नतिको दिशातिर अभिमुख हुन सक्दछ । हामी फरक फरक ठाउँमा, फरक फरक नाउँमा, फरक फरक काममा लागेका भए पनि सबैले चाहेको सुख र आनन्द हो । हामी सबैको खोजी एउटै हो— सुख, आनन्द र सत्य । सत्य भन्नु नै सुख हो र सुख भन्नु नै सत्य हो । हामीले सबैतिर सत्यकै खोजी गर्न सक्नुपर्दछ र सबैतिर सत्यकै दर्शन गर्न सक्नुपर्दछ ।
हामीले जे खोज्दछौँ, त्यही पाउँदछौँ । मस्तिष्कभित्र उठ्ने हरेक विचारहरू अर्थपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै पनि बिर्सन हुँदैन । हरेक पटक उठ्ने विचारहरूले केही न केही असर अवश्य छोडेका हुन्छन् । त्यसैले, मनमस्तिष्कमा सत्यसम्बन्धी विचारहरू उत्पन्न भइरहून् भन्नेतिर हामी विषेश सचेत बन्नुपर्ने हुन्छ । वरपर हामीले जे देख्छौँ, ती सबै सत्यकै साक्षात्रूप हुन् भनेर हामीले लिन सक्यौँ भने सत्यको कहिल्यै पनि अभाव हुँदैन ।
विशिष्ट पुरुषहरूको शब्दकोशमा कतै पनि ‘विभेद’ भन्ने शब्दावली हुँदैन । विभेदका ठाउँमा उनीहरूले ‘समता’ शब्दको अधिक प्रयोग गरेका हुन्छन् । मान्छेमान्छेका बीचमा विभेद सिर्जना गर्ने काम त केवल मान्छेले नै गरेको हो । योगीहरू त जीव र जडमा समेत फरक देख्दैनन् । सुकेको रुखको ठुटोप्रति पनि उनीहरूमा प्रेम भरिएको हुन्छ । उनीहरूको विचारमा ईश्वरले रहित यो जगत्को कुनै पनि विषय, वस्तु र व्यक्ति छैन । कसैलाई उचाल्ने र कसैलाई पछार्ने काम त केवल सामान्य मानिसको काम हो । विशिष्टहरूले कसैलाई पनि फरक दृष्टिले हेर्दैनन् ।
यहाँसम्म कि आपूmलाई समेत उनीहरूले अरुभन्दा फरक देष्टिले हेर्ने गर्दैनन् । ‘म जेछु, मबाहेकका सबै त्यो हुने हैसियत राख्दछन्’ भन्ने विशिष्ट चेतनाको आलोकमा उनीहरू रमाउने गर्दछन् । गीतामा भगवान श्रीकृष्णले पनि यससम्बन्धी दिशानिर्देश गर्ने काम गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ः यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।। (जसले दृश्यादृश्य सबैतिर मलाई देख्दछ, र सम्पूर्ण दृश्यादृश्य जगत् मभित्र समेटिएको देख्दछ, उसका लागि म कहिल्यै पनि अदृश्य छैन र ऊ पनि मेरा लागि अदृश्य हुँदैन ।) यहाँ कृष्णले सत्यलाई प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ । हामीले जहाँ हेरे पनि त्यो विशिष्ट कृष्ण तत्त्व अथवा जन्मजात अस्तित्वलाई भेट्न सक्दछौँ ।
समान्य चेतना भएका व्यक्तिले जडभित्र पनि चेतनाको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । जसले सचेत र अचेत सबैको शाश्वत र आदि स्रोत एउटै बह्माण्डीय ऊर्जा एवम् विश्वशक्ति हो भनेर बुझेको हुन्छ, उसले सर्वत्र सत्यको दर्शन गर्ने हैसियत राख्दछ । हामीकहाँ ढुङ्गालाई भगवान्को बिम्व मानेर पूजा गर्ने जुन चलन छ, त्यो चलन विशिष्ट चेतनाको अभिव्यक्ति हो । साक्षात् श्रीकृष्णमा जुन शक्ति र ऊर्जा छ, त्यो एउटा शालिग्रामस्वरूप ढुङ्गालाई पूजा गर्दा पनि पाउन सकिने निष्कर्ष हाम्रा विशिष्ट साधक एवम् योगीसज्जनहरूको लामो तपस्याको प्रतिफल हो । समान्य मानिसहरू देख्ने कुरालाई मात्र सबैथोक मान्छन्, तर विशिष्ट साधकहरू भने देख्न सकिने र नसकिने दुवैको अस्तित्व स्वीकार्दछन् । नेदिने पनि देखिने बन्न सक्दछ भने देखिने अन्ततः नदेखिनेमा रूपान्तरित हुुनुपर्ने नियतिबाट अलग रहन सक्दैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ हुन्छ । यसैले, सबै उस्तै हुन्, सबैको समान मूल्य र महत्त्व छ भन्ने दैवी आज्ञालाई स्वीकार्नुलाई नै विशिष्ट चेतना भनेर भनिन्छ ।
‘आत्मपौम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ।।’—भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा व्यक्त गर्नुभएको यो श्लोकको अर्थ हो, प्रिय अर्जुन, जुन योगी आपूmभित्र जस्तै सबैतिर समान देख्दछ, साथै, सुःख र दुःखमा पनि समान धारणा राख्दछ, त्यस्तो योगी परम श्रेष्ठ मानिएको छ । हामीले आपूmभित्र रहेका हरेक अङ्गलाई उत्तिकै महत्त्व दिएका हुन्छौँ । हामीले आँखालाई धेरै मूल्य दिने तर गुदद्वारबाट मल निस्कने भएका हुनाले गुदद्वारलाई कम मूल्य दिने काम कहिल्यै पनि गर्न सक्दैनौँ । हामीसँग मलमूत्र निष्कासन गर्ने अङ्गहरू छन् । थुक, सिँगान, खकारसँग सम्बन्धी अङ्गहरू पनि छन्, तर कुनै पनि अङ्गलाई विशेष र कम भन्ने विभेद हामीले कहिल्यै पनि गर्न सक्दैनौँ । हामीले जुन मूल्य टाउकोलाई दिएका हुन्छौँ, त्यही मूल्य पैतालाका औँलाहरूलाई दिएका हुन्छौँ । चाहे जुन अङ्गमा चोट लागेको होस््, हामीले समानरूपमा दुःखाइको अनुभव गर्ने गर्दछौँ ।
त्यसरी, नै एउटा विशिष्ट साधकले आफ्नो जीवन र अर्काको जीवनलाई उस्तै प्रकारले हेरेको र बुझेको हुन्छ । बाहिर कसैलाई दुःख पर्दा उसले पनि महसुस गर्दछ भने सुख पाउँदा त्यसको पनि अनुभूति गर्दछ । यसो किन भएको हो त भन्दा सबैलाई आपूmजस्तै ठानेका हुनाले । जोसँग विशिष्ट अभिभावकीय योग्यता र शक्तिको विकास भएको हुन्छ, उसले सबैलाई आफ्नै हुन् भनेर बुझेको हुन्छ । यो सारा संसारका नियन्तालाई यस ब्रह्माण्डका सानादेखि लिएर ठूलासम्मका सबैको उत्तिकै चासो र चिन्ता लागिरहन्छ । त्यसरी नै, आपूmलाई जस्तै अरुलाई पनि मूल्य दिने व्यक्तिहरू सामान्यबाट माथि उठिसकेका हुन्छन् ।
दुःख र सुखप्रति पनि विशिष्ट पुरुषहरूमा भिन्नाभिन्नै धारणा हुँदैन । दुःखमा पनि सुखको अनुभूति र सुखमा पनि दुःखको अनुभूति गर्ने विलक्षण शक्तिले उनीहरू भरिएका हुन्छन् । व्यापकको चिन्तन गर्दागर्दै हामी पनि व्यापक बन्दछौँ । त्यसैले, विचारलाई जहिले पनि व्यापक भएको अनुभूति गर्नुपर्दछ । आपैmँले दिन नसके पनि आपूmले मानिसहरूलाई प्रशस्त दिएको कल्पना गर्दा पनि हामीभित्र व्यापकताको भावना विकसित भएर जाने तथ्य विद्वान्हरूले औँल्याएका छन् ।
तेरो र मेरो भन्ने भावना त सानोचित्त भएका मानिसहरूको हुन्छ । जो आफ्नै सङ्कीर्ण चिन्तनको निश्चित घेराभित्र बन्दी भएर बसेको छ, उसले मात्र यो तेरो हो र यो मेरो हो भनेर भन्दछ । चेतनाको सर्वोच्चतालाई स्पर्श गरिसकेका बुद्धपुरुषहरू भने ‘यी सबै विषय र वस्तुहरू उसैका हुन्, जसले यिनलाई बनायो’ भनेर भन्दछन् ।
समता निकै महत्त्वपूर्ण शक्ति हो, मनुष्यमात्रको । हामीले आर्थिक समानताको कुरा ग¥यौँ । विभिन्न खाले अधिकार र समानताको अधिकारको कुरा ग¥यौँ, तर मनुष्यका लागि मात्र । समताको कुरा मनुष्यका लागि मात्रै भन्ने नै हुँदैन । कार्ल माक्र्सलगायत प्रगतिशील चिन्तकहरूले मानिसमानिसबीचको शोषण र विभेदको मात्रै कुरा गरे, तर हाम्रा पूर्वीय मनीषी र तत्त्वज्ञहरू भने जड र चेतनबीच पनि समताको कुरा गर्दछन् । उनीहरूले त मनुष्य र ढुङ्गामुढालाई फरक ढङ्गले हेर्ने कुरा पनि कहिल्यै गर्दैनन् । हामीकहाँ कतिपयले यस्तो मान्यता राख्दछन् ः ‘ईश्वर राम्रा कुराहरूमा मात्रै हुन्छन् । नराम्रा र निर्जीव जडमा हुँदैनन् ।’ यो ईश्वरीय मूल्यको एकदमै विपरीत मान्यता हो । यो मान्यता न त तर्कसङ्गत छ, न त प्राकृतिक नै । यो केही उपल्ला सुकिलामुकिलालाई मात्रै खुसी पार्न बनाइएको सङ्कीर्ण मान्यताबाहेक केही होइन । ईश्वर सबैका साझा हुन् । ढुङ्गामाटोेदेखि मनुष्यसम्म सबैको निर्माण गर्ने शक्ति एउटै हो, फरक होइन ।
हामी निकै धेरै अगाडि छौँ । सबैभन्दा क्रान्तिकारी र प्रगतिशील भनिले माक्र्सले पनि मान्छेमान्छेबीचको विभेदभन्दा अर्को विभेद देखेनन् र मानिसमानिसका बीचमा समताको कुरा गरे । तर, गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले हजारौँ वर्षअघि त्योभन्दा धेरै क्रान्तिकारी र समायातीत विचार व्यक्त गर्नुभएको छ गीतामा ः ‘सबैमा म रहेको छु, ममा सबै रहेका छन् ।’ उहाँको आशय के हो भने संसारमा मान्छे मात्र होइन, कीटपतङ्ग पनि उत्तिकै मूल्यवान् छन् । मूल्यका दृष्टिले जीव र निर्जीव कत्ति पनि फरक छैनन् । सबै उत्तिकै मूल्यवान् छन् । कसैले कसैलाई पनि हत्या, हिंसा र शोषण गर्न पाउँदैन ।
त्यसैले, हामी माक्र्सको प्रगतिशील समानताको दर्शनसँग प्रभावित छौँ भने पनि नराम्रो कुरा भएन । तर, हामी क्रान्तिकारी हौँ भने र क्रान्तिलाई साँच्चै मन पराउँछौँ भने वैदिक मूल्यलाई स्वीकार्नुको कुनै विकल्प छैन । माक्र्सको साम्यवाद मान्छेको समस्याभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन, तर गीताको साम्यवादले सबैलाई सम्बोधन गरेको छ ः ढुङ्गा, माटो, कीटपतङ्ग, बोटवनस्पति, पशुपक्षी र मनुष्य । माक्र्सको साम्यवाद एकाङ्की छ, तर वैदिक साम्यवाद पूर्ण र प्राकृतिक छ । माक्र्सको साम्यवाद सङ्कीर्ण र मनुष्यसापेक्ष छ भने गीताको साम्यवाद व्यापक र ब्रह्माण्डका प्रत्येक सिर्जनासापेक्ष छ । हामी सङ्कीर्णताका पछाडि लाग्ने कि व्यापकताका पछाडि ? अवश्य विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।
आचार्य लक्ष्मण भण्डारी/लोकान्तर